I-Rose Tattoos Ink Inkcazo - I-Tattoos Iingcamango zobugcisa
sonitattoo Matshi 25, 2017
1. Uhlobo lwamaMveli Iingcamango zemizuzu yesigxina emantombazana
Sebenzisa i-tattoo yama-rose engahlaziywa kwizakhiwo ezahlukeneyo. Inokucwangciswa njengengcambu encinane, inqwaba yeentyantyambo, kunye neengqungquthela, zingenamakhaza, njengeengqungquthela, njengemigqomo kunye nezakhiwo ezahlukeneyo onokufuna ukuvelisa ngazo.
2. Amagxa avuke inkinobho yokukhenkta itek kumantombazana
Inkolelo inokuba uClloris, unkulunkulukazi weentyantyambo, wayengumntu owenza uvuko lokuqala lwesiGrike ngoko, u-Aphrodite, unkulunkulukazi wothando wayengumntu owayefake umxhelo xa uDionysus, inkosi yewayini yayifake i-flagrance ekhangayo.
3. Sexy rose tattoo design ink inkcazo kwiphepha labesifazane
Ngoku uyaqonda ukuba kutheni abafazi basebenzise ukutsalwa kwe tattoo ukuze benze imixholo eyahlukeneyo emizimbeni yabo.
4. Uthando luvukile ngombono we-tattoo inki kubafazi
Yintoni enhle ngaphezu kwayo yonke indawo eyenziwe yenziwe isimboti esityebileyo emlenzeni ongezantsi? Le ngenye yeendawo ezifanelekileyo ukubeka uphawu lwakho lwe tattoo emzimbeni wakho.
5. Imikhono elula yatshintsha i-tattoo ink kumantombazana
Fumana into emangalisayo kwimeko apho ulingane nezidalwa kwaye utshintshe isilwanyana sakho kwi tatto rose. Ngeke uqiniseke ukuba uyayithanda indlela eya kubonakala ngayo kwesikhumba sakho.
6. iqatha i-tattoo ink inkcazo yabesifazane
Iimpawu zeRose zifumene ukuba ngumlambo omkhulu phakathi kwabathandana be-tattoo. AmaT Tattoos ezenziwe ngama rose ziyamangalisa ukuba zeziphi izizathu esizibona rhoqo kwiidoda.
7. Ubumnandi obuhle be-Tattoo design ekwiphepheni yamantombazana
Ukubaluleka kokusuka kwimihlaba kunokuthi kuthatyathwe ngabantu abathile bacinga ngeentyatyambo. Sineempawu ezihlukileyo ezahlulela izinto ezininzi kuthi. Xa sinobudlelwane, sixoxisana ngokusa kwephuzi; ukungazi kakuhle kukumhlophe okanye kuphelile xa uthando lubonakaliswa yimvu ebomvu.
8. Olubomvu yombono we tattoo kwintombazana ehlombe
Iimpawu ze-rose ziphelile zixutywe kwimisebenzi eyahlukeneyo yobuntu. Akucingeki ukuba ezi tattoos zichazwe zibe zivelele kakhulu. Oku akuthethi ukuba amadoda avumeleke ngokwaneleyo yedwa ngokuthanda i rose.
9. Uluhlu olumbala umdwebo we tattoo kwiingalo
Hlela ngakumbi xa unesimboli se-rose esibhalwe phantsi kwiimisipha zakho. Isigijimi sihlala sicacile rhoqo xa uthabatha kuyo.
10. I-cute cute rose i-tattoo design ink ngeejazi kwimikhono
Izandla zingaphumelela kakhulu nge tattoo yama-rose enokusebenza njengento eyahlukileyo yezinto ezinjalo kuwe.
11. Ubomvu obunobumba obomvu obumnyama obuninzi kumamakazi ngasemva
Sibona inani elikhulu labesifazane beqonda ubugcisa. Ngaba ubonile ama-tattoos ngexesha elitsha nje nje? I tattoo njengale mangalisa
12. I-Simple tattoo i-tattoo design ink inkcazo yabasetyhini kwi-sleeve
tattoosbathanda i tattoosi-tattoostatto flower flowerngesandlaiipattoosutywala tattootattoo engapheliyodesign mehndiizigulanei-cherry ityatyamboukutshiza amathambotattoos zohlangazengalo zengaloizifuba zesifubaTattoos zeJometritatna tattooiifotto zentamotattoos zenyangatattoos ezinyawoI-Ankle TattoosIndlovu yeendlovutattoo yamehlotattoostattoos kubantuicompass tattootatto tattoosIintliziyo zeTattoosiifoto eziphakamileyocute tattoosi tattooizithunywa zezulusibinitattooiifatyambo zeentyatyambotattoostattotattoo yedayimaniowona mhlobo womhlobongombonotattoosiimpawu zezodiac zempawutattoos kumantombazanazinyonitattoos zelangaIintyatyambo zeTattooihoi fish tattooiidotitattoozomculo tattoos